Found 35 ~ Mateu, Mako, Ruka, John, Mabasa, VaRoma, 1 VaKorinte, 2 VaKorinte, VaGaratiya, VaEfeso, VaFiripi, VaKorose, 1 VaTesaronika, 2 VaTesaronika, 1 Timoti, 2 Timoti, Tito, Firimoni, VaHebheru, James, 1 Petro, 2 Petro, 1 Johani, 2 Johani, 3 Johani, Judha, Zvakazarurwa
kupa vanhu vake ruzivo rworuponeso ruri mukuregererwa kwezvitadzo zvavo,
Jesu akati kwaari, “Nhasi uno ruponeso rwauya kumba ino nokuti murume uyu mwanakomanawo waAbhurahamu
Ko zvino ndingati vakagumburwa zvokubva vawira pasi zvachose here? Kwete, handizvoba. Asi nokukanganisa kwavo ikoko ruponeso rwakabva rwaenda kune vechirudzi kuti vaIsiraeri vaite shanje.
nokuti anoti, “Nenguva yakafanira ndakakunzwa, nezuva reruponeso ndakakubatsira, chinzwa, ino ndiyo nguva yacho yakafanira, irori ndiro zuva roruponeso.”
Naizvozvo hama dzangu dzadiwa, savanhu vanoteerera nguva dzose, nezvo nyatsoshandirai ruponeso rwenyu muchitya uye muchidedera kwete kana ndiripo chete asi zvikuru kana ndisipo
Maari ndimo matakawana ruponeso rwokuregererwa zvitadzo.
Naizvozvo ndinotirira zvose pamusana pavasarudzwi kuti naivowo vawane ruponeso rwuri muna Kristu Jesu nembiri yarwo inogara narini narini.
Paakanga zvino, aitwa munhu akaruramisisa akazova musakisi woruponeso kuna vose vanomuteerera,
Kunyange zvedu tichitaura nomutowo iwoyu, asi kwamuri, vadikanwi, tinechokwadi chokuti munezvinhu zviri nani zvoruponeso.
Torai mwoyo murefu waTenzi wedu soruponeso. Ndizvowo zvamakanyorerwa nehama yedu Paurosi maererano noungwaru hwaakapiwa, achitaura nezvazvo mutsamba dzake dzose.
Vadikanwi pandaiva neshungu dzokukunyorerai nezvoruponeso rwedu tose, ndakaona chiri chinhu chinofanira kuitwa chokuti ndikunyorerei ndichikukumbirai kuti murwirewo chitendero chakapiwa chakamwe kuvatsvene.
“Ruponeso runobva kuna Mwari wedu agere pachigaro choumambo uye runobva kuHwayana.”
Mushure maizvozvi ndakanzwa izwi guru rainge remhomho huru yavanhu mudenga vachidaidzira vachiti, “Areruya! Ruponeso nembiri nesimba ndezvaMwari wedu.